Sidee Barashada Mashiinka iyo Acquisio u kobcin doonaan ganacsigaaga | Martech Zone
Intii lagu gudajiray kacaankii warshadaha bani'aadamku wuxuu u dhaqmay sida qaybo mashiin, oo la dhigay hareeraha safafka, isku dayaya inuu naftooda u shaqeeyo sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Markaan galno waxa hadda loogu yeero "4-kacaankii Warshadaha- Waxaannu aqbalnay in mashiinnadu aad uga fiicnaadaan farsamada dadka.
Adduunyada mashquulka badan ee xayeysiinta raadinta, halkaasoo maareeyayaasha ololuhu isku dheellitirayaan waqtigooda inta udhaxeysa hal-abuurka ololeynta, iyo farsamaynta maaraynta iyo cusbooneysiinta maalin kasta, waxaan mar kale waqtigeenna ugu badan gelineynaa buuxinta kaalin macno weyn u leh mashiinka.
Qarni ka hor, waxaan ka beddelnay wax-soo-saar oo aan u samaynay dhaqaale ku saleysan adeegyo. Isbadalkan ayaa markale badalay dabeecada shaqaalaha - iyo suuqgeynta xaalado badan ayaa gacan ka gaystay hogaaminta isbadalkaas. Hadda, markale doorka suuqleydu wuu isbedelayaa, kiiskanna, waa la casriyeeyay.
Dad badan oo suuqley ah oo horay u fekeraya ayaa ku faraxsan isbeddelkan, markii aan xoogga saari karno waxa ugu wanaagsan ee aan qabanno - wax cusub - halka mashiinnada ay guda geli doonaan oo ay qaban doonaan waxa ugu wanaagsan ee ay qabtaan - falanqeeyaan tiro aad u tiro badan oo xog ah si caqligal ah loo garto loona adeegsado qaababka.
Xogta Weyn iyo Barashada Mashiinka, waa kaabayaasha aasaasiga u ah waayi cusub oo xiisa leh oo u oggolaan doonta sumadaha inay kula xiriiraan macaamiisha iyada oo loo marayo marinno cusub oo dijitaal ah qaab aad u dadnimo leh iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad casri ah. Ranee Soundara waayo, Dhexdhexaad.
Inkasta oo qaarkood wali diidan yihiin inay qaataan tiknoolajiyada cusub ee suuqgeynta, suuqleyda badan waxay bilaabeen inay fahmaan in barashada mashiinka ay muhiim u tahay ololeyaasha waxtarka sare iyo natiijooyinka xooggan, tallaabada xigta waxay tahay helitaanka xalka saxda ah.
Sidee Barashada Mashiinka uga shaqeeyaa Suuqgeynta Raadinta
Sannadka 2014, maalgashiga raasamaalka ee bilowga Sirdoonka Artificial, oo ay ku jiraan barashada mashiinka, barashada qoto dheer, iyo saadaalinta Analytics ayaa ku dhuftay ku dhowaad toddobo laab, laga bilaabo $ 45M sanadkii 2010 ilaa $ 310M sanadka 2015 sida laga soo xigtay CBInsights.
Maaddaama maal-gashiga AI iyo barashada mashiinku ay sii wadaan inay sii xoogeystaan ​​iyadoo ay sabab u tahay "Kacaankii 4aad ee Warshadaha", xarumaha awoodda shirkadda waxay u wareegeen si waafaqsan. Hoggaamiyeyaasha waxqabadka waxay si siman mas'uul uga yihiin miisaaniyadda iyo wax soo saarka tikniyoolajiyadda casriga ah. Sida Gartner Research caan ku saadaaliyay, by 2017, CMO-yada waxay ku bixin doontaa wax badan IT-ga dhiggooda CIOs.
Isbeddelkan ayaa dhacaya sababtoo ah suuqleyda ayaa ku sii qulqulaya tsunami xog ah. Shaqadan degdegga ah ee shaqada ee lagu qodayo dib-u-habeynta xog-ururin aan nidaamsanayn si loo tijaabiyo loona fahmo sawirka weyn ayaan suurtagal ahayn in lagu sameeyo 130 exabytes oo xog ah oo ku sii jiraya dijital dijital ah (taasi waa 18 eber annaga guud ahaan dadka caadiga ah). Dadku waxay awood u leeyihiin inay ka shaqeeyaan ugu badnaan 1000 terabytes (12 eber), waxaanan ka baaraandegnaa tirooyin aad uga gaabiya, iyadoo wax aan ugu yeerno qalad aadanaha. Rumayso ama ha rumaysan, tani waxay khuseysaa in badan oo ka mid ah raadinta suuq-geynta iyo otomaatigga ololaha sida ugu badan ee ay u sameyso aag kale oo suuq-geyn ah.
Marka ay timaado saxnaanta iyo waxqabadka, barashada mashiinku waxay ku ciyaarayaan meelo kaladuwan oo kala duwan, dhammaan kuwa suuqleyda ah ee wali ku dhufanaya horyaalada yar yar ayaa ku adkaan doonta inay sii ahaadaan tartan maadaama tartamayaashooda ay ka faa'iideystaan ​​mashiinka barashada algorithms.
Waa maxay Barashada Mashiinka, sida saxda ah?
Barashada mashiinka waa maaddo aad u baaxad weyn oo leh habab iyo codsiyo badan, laakiin waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa in lagu xalliyo dhibaatooyinka iyadoo la helayo qaabab aannaan si fudud isu arki karin, sida laga soo xigtay suldaanimo.
Tusaale ahaan, xaraashka xayeysiintu waa goob mugdi badan, oo suuqleyda aysan hubin halka ay ka dhigayaan dalabyada, sida wax looga beddelo taleefanka gacanta, iyo ugu dambeyn sida loo helo beddelaad badan inta ugu yar ee suuragalka ah. Intaas waxaa sii dheer, ma jiro waqti ku filan oo loo qoondeeyo olole kasta si loo hubiyo inay kordhineyso waxqabadkeeda marka loo eego kartideeda. Adoo adeegsanaya barashada mashiinka, AdWords iyo iibiyeyaasha sadexaad waxay siinayaan xalal tiknoolajiyad ah oo si dhow ula socda xaraashka xayeysiinta, iyo inay bartaan sida loo cusbooneysiiyo loona hagaajiyo dalabyada si toos ah iyadoo la adeegsanayo xog taariikhi ah si loo saadaaliyo dalabyada ugu fiican ee lagu dejinayo iyadoo loo eegayo miisaaniyadda, dhibcaha tayada, tartanka, iyo isbeddelada ee xaraashka inta lagu jiro maalinta.
Qaabkii hore ee loo maamuli jiray ololeyaasha xayeysiinta ayaa i xasuusinaya dhacdadii hore ee Simpsons markii uu Homer Simpson dejiyay shimbir cabaya si uu shaqadiisa ugu qabto. Xaaladdan oo kale, algorithms-ka wax lagu barto mashiinku ma ahan oo keliya inuu ku riixo furaha "Y" in ka badan iyo in ka badan, waxay si joogto ah ula qabsadaan iyagoo adeegsanaya macluumaadka la soo ururiyay waxayna ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa waxqabadka ka baxsan waxa aadanaha awood u leeyahay.
Waad ka gudbi kartaa masuuliyadahaas maalinlaha ah waxaadna xooga saari kartaa qaadashada macaamiisha cusub, sameynta hal abuurnimo, iyo hagaajinta waxqabadka qaab bini aadamnimo ka badan.
Laba Shimbirood oo leh Hal dhagax
Dhibaatada inta badan suuqleydu la kulmaan marka ay wadaan ololeyaasha raadinta waa laba laab, ma jiro waqti ku filan ama shaqaale ay ku fariistaan ​​halkaas oo ay ku hagaajiyaan dalabyada iyo miisaaniyada dhammaan xisaabaadka iyo ololayaasha (taas oo yareynaysa awoodda kor u qaadista), iyo tan labaad, suuqleyda ayaa ku dhibtoonaya inay gaaraan natiijooyinka ugu weyn ee xaraashka tartanku sii kordhayo.
Si kooban, dadku waxay rabaan inay wax u qabtaan si dhakhso leh, ka wanaagsan oo fudud, sida kaliya ee taas lagu samayn karaa waa in lagu wareejiyo mashiinnada.
Acquisio waxay bixisaa waxaan aaminsanahay inay xal u gaar ah u tahay suuqa raadinta, taas oo u oggolaanaysa suuqleyda inay waqtigooda xoogga saaraan dadaallada wax soo saar iyo istiraatiijiyad leh iyagoo ka faa'iideysanaya maalgashiga aan ku sameynay barashada mashiinka horumarsan maamul dalabyada iyo miisaaniyadaha la raadinayo ee la bixiyay. Natiijadu waa horumarin weyn oo weyn oo aan ku koobnayn wax soo saarka oo keliya, laakiin sidoo kale waxqabadka ololaha. Waxaa la yiraahdaa Bid iyo Maareynta Miisaaniyadda (BBM)
Mashiinkayaga mashiinka barashada ku saleysan, dalab lahaanshaha iyo nidaamka maareynta miisaaniyada ayaa ah qaabka kaliya ee ganacsi ee soo noqnoqda ee AdWords iyo Bing, hagaajinta dalabyada iyo miisaaniyadaha sida ugu dhakhsaha badan ee ay u cusbooneysiiyaan daabacaha isla markaana saadaaliyo waxa dalabka xiga noqon doono - kaas oo waxaan ku caddeyn karnaa darawallada waxqabadka ololaha ka wanaagsan kuwa kale algorithms-ka la saadaalin karo. Maamulaha guud, Marc Poirier ee Acquisio.
Sidee Bid iyo Maareynta Miisaaniyadda (BBM) u shaqeysaa
Sida baabuur iskiis u wada uu awood u leeyahay inuu aqoonsado qaababka darawalka iyo dabeecadda xilligan, oo uu la qabsado hareeraha waddada, BBM waxay had iyo jeer ka warqabtaa deegaanka xaraashka, iyadoo ka baaraandegaysa malaayiin xisaab iyo hagaajin la xiriirta isbeddelada xaraashka. , waqtiga maalinta iyo in ka badan, si aad ololahaaga si habsami leh ugu socoto. Tani waxay keeneysaa waxqabad guud ahaan olole wanaagsan, dhammaan intaad kursiga dambe fariisato oo algorithms-ka kuu daayo adiga.
Xaraashka PPC, haddii aad dejiso dalab, oo aad u maleyneyso inuu macquul yahay, ka dibna ka tago, isbeddelada joogtada ah ee sicirka maalintii oo dhan waxay ka dhigan tahay inaad u badan tahay inaad dib ugu soo laabaneyso koontadaada berrito oo aad ka niyad jabi doontid natiijooyinka. Waxaa taas ka sii daran, waxaad u badan tahay inaad lacag badan ku bixisay qasabadaha qaarkood, oo kuwa kale ku seegtay.
Qaar badan oo ka mid ah algorithms-ka la saadaalinayo ayaa dalabyada u hagaajiya si aan caadi ahayn saacad ahaan, maalin kasta ama xitaa toddobaadle. Adoo saadaalinaya oo hagaajinaya dalab 30kii daqiiqoba mar, Acquisio wuxuu kaqeybqaataa xaraashka in kabadan inta kadambeysa xalka kale ee wax hagaajinta, wuxuuna sameeyaa sixitaan dheeri ah Tani waxay gacan ka geysaneysaa hoos u dhigista CPC / CPA hoos iyo riixitaan / beddelo.
Xaqiiqdii, xalkayagu wuxuu cadeeyay inuu yareeyo qiimaha halkii qasab celcelis ahaan 40%, markii la fiirinayo in kabadan xisaabaadka 20,000 ee ku shaqeeya muddada hal bil ah Acquisio. Iyo, iyada oo algorithms ay u socdaan si sax ah miisaaniyadda maalinta oo dhan iyo bisha oo dhan, xisaabaadka isticmaalaya BBM waxay ahaayeen 3x waxay u badan tahay inay kordhiyaan miisaaniyadda oo dhan iyada oo aan la dhaafin.
Marka ay timaado waqtiga la keydsaday, qeyb ka mid ah WSI - oo ku faaneysa mid ka mid ah shabakadaha ugu waaweyn ee suuq geynta suuq-geynta adduunka - waxay awood u yeelatay inay saacado ka jarto, haddii aysan maalmo ahayn, howshooda caadiga ah ee maaraynta ololaha iyagoo adeegsanaya BBM.
Waqti aad u badan ayaan ku keydinay otomaatigga waxaan diirada u saari karnaa tayada ololaheena. Heitor Siviero, Isuduwaha Mashruuca ee WSI Brazil.
Iyada oo suuqleyda ay diirada saareyso hagaajinta tayada ololaha, iyo algorithms-ka barashada mashiinka oo maalin kasta socda si loo wanaajiyo waxqabadka, macaamiisha badanaa waxay arkaan waxa aan ugu yeerno, "x-garaafyada," halkaasoo ay ka jiraan kororka la ogaan karo iyo hoos udhaca celceliska CPC ka dib markay dejiyeen mashiinkeena barashada algorithms .
Natiijooyinka kuwan oo kale ah, way u fududahay ganacsiyada inay soo jiitaan macaamiil cusub, iyo waqtiga lagu kaydiyo hawlaha maaraynta ololaha gacanta, waxay ku sugan yihiin meel fiican oo ay ku qaadan karaan macaamiisha cusub ayna ku cabbiri karaan howlahooda halka ay muhiimka ka yihiin: istiraatiijiyad, hal abuur iyo fulin.
Waxa ugu weyn ayaa ah, tikniyoolajiyadeena ayaa noo oggolaaneysa inaan gaarsiino waxqabad olole oo kala duwan xitaa xisaabaadka ugu adag-in la-hagaajiyo, oo ay ku jiraan kuwa leh miisaan aad u hooseeya ama kharash yar, caqabad joogto ah ku ah qof kasta oo maareynaya ololeyaasha raadinta ganacsiyada yaryar.
Qaad Tallaabada Xigta
Haddii aad qayb ka tahay ganacsi yar oo maxalli ah ama Fortune 500, waa waqtigii la qaadan lahaa da'da mashiinka wax lagu barto ee suuq raadinta ah.
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka barato sida dalabkeenna iyo xallinta maareynta miisaaniyaddu u shaqeeyaan:
Ka daawo Webinar Jadwal Demo Shakhsiyeed
Tags: Kacaankii 4aad ee warshadahahelidxaraashka xayeysiiskaAdWordsalgorithmssirdoonka macmalbbmdalab iyo maaraynta miisaaniyadaxogta dalabxeerarka dalabBloombergcb fikradahasuldaanimocilmi baarishomer simpsonkacdoonka warshadahawaa vs ciobarashada mashiinkaMarc Poirierraadinta lacagta lehdalabyada raadinta ee la bixiyayranee soundaradalabyada raadintawsiwsi brazil